Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Haweenka Ogadenya Minnesota oo afur u sameeyay halganto Sahra Macallin
Ururka Haweenka Ogadenya Minnesota oo afur u sameeyay halganto Sahra Macallin
Posted by ONA Admin	/ August 13, 2012
Ururka Haweenka Ogaadenya – Ogaden Women Association – ee gobolka Minnesota ayaa galabta afur iyo soo dhawayn usameeyey Marwada Koobaad ee Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya Marwo Sahra Macalin Axmed oo dhowaan booqasho gaaban ku timid magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Marwo Sahra Macalin oo in muddo ah ku sugnayd qaarada North America tan iyo intii ay kasoo qayb gashay shirkii Jaaliyadaha Ogadeniya ee bishi hore lagu qabtay magaalada Toronto ee wadanka Canada ayaa xalay afur si wanaagsan loosoo agaasimay laqaadatay ururka haweenka Minnesota.
Afurkan iyo soodhowayntan oo ay sidookale kaqayb galeen xubno katirsan maamulka jaaliyada Ogaadeeniya ee gobolka iyo ururka dhalinyarada OYSU ayay Marwo Sahra halkaas kasoo jeedisay warbixin guud iyada oo sigaar ah ula dardaaranta ururka haweenka. Ururka haweenku waa in uu kaalin libaax kaqaataa halganka Ogaadeenya maanta kujirta gaar ahaan haweenka kunool magaaloyinka London iyo Minneapolis sababta oo ah bay tidhi Marwo Sahra dadka reer Ogaadeeniya ee ugu badan wadamada dibadaha ayaa degen labadaas caasimadood.
Dhanaca kalena ururka Haweenka ayaa aad u amaanay booqashada Marwo Sahra Macalin ay kusoo gaadhay magaalada Minneapolis ee gobolka Minneasota. Waxayna kacodsadeen in ay booqasho ay mudo dheer kujoogto kusoo bixiso gobolka mustaqbalka dhow. Ugu dambayntiina afurkii ayaa kusoo dhamaaday jawi wanaagsan oo farxadleh iyada oo laga yaabo in ay marwadu layeelato shirar koob kooban ururada haweenka iyo guud ahaanba xubnaha jaaliyada Ogaadeeniya ee gobolka Minnesota maalmaha fooda inagu soohaya hadii Eebbe idmo.